ULuka Shaw Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
Ikhaya STARS E-EUROPE ULuka Shaw Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba egcwele ye-Back Genius Ekhohlo eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; 'Amadola ayizigidi eziyisithupha'. I-Luke Shaw Ingane Yethu Indaba kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti egcwele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube manje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni, impilo yomshado kanye namanye amaqiniso angaziwa ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngejubane lakhe lokushaywa kwesinyawo kodwa abambalwa bacabanga nge-biography kaLuka Shaw okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
ULuka Shaw Ubuntwana Indaba I-Untold Biography Facts -Isiqalo sokuphila
ULuka Paul Hoare Shaw wazalwa ngosuku lwe-12th kaJulayi 1995 eNkosiniston phezu kweThames, e-United Kingdom.
Uhlanganyela naye ngosuku lwakhe lokuzalwa UJames Rodriguez, U-Brock Lesnar, uMalala Yousafzai (uMnumzane oPhezulu wokuPhumela ukuPhuthukiswa koKhuseleko), uSundar Filei (CEO we-Google), noBill Cosby.
ULuka wazalelwa unina, uJoanna Shaw nobaba, uPaul Shaw. Ekhulela eSurrey, waya eRydens Enterprise School eHersham.
Uthando lwakhe nge-Chelsea FC Gianfranco Zola wagxila uthando lwakhe lwebhola. ULuka omncane wakhulela njengomphathi weBelland futhi wathi uqale ukufuna ukudlala eLondon. Eqinisweni, wenza umzamo esikoleni sabo njengomuntu oneminyaka engu-8 ubudala. U-Shaw wadlala esikhungweni sokuthuthukiswa kwe-Chelsea e-Guildford, kodwa akazange anikezwe indawo yezemfundo.
Naphezu kokudumazeka, uLuka wayelokhu ethanda kakhulu ebhola. Waqhubeka nokuphishekela iphupho lakhe esemncane. Ku-2001, wajoyina u-Hersham owamtshela eMolesey Juniors ngenhloso yokuzakhela izikole ezinkulu zebhola. Ku-2003, iSouthampton yamnika ucingo. Ngemuva kokudlala i-club iminyaka engu-11 (2003-2011 yesikole), uLucky wajoyina iManchester United ku-2014 njengentsha ebiza kakhulu ethengwe yiqembu. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
ULuka Shaw Ubuntwana Indaba I-Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Njengesikhathi sokubhala, uLuka engashadile kepha ujabulela ubudlelwane nentombi yakhe ethandekayo uShelby Billingham. Lo mbhangqwana ujabule kakhulu nomunye futhi ujabulele ubuhlobo bawo ngenjabulo.
ULuka Shaw noThandeka, uShelby Billingham
Bobabili uLuka noShelby bahlukanisa izindlela ngokushesha nje lapho esuka eLondon eya eManchester. Lokhu kwaba lapho eqala ubuhlobo nentombi u-Anouska Santos. Uthando luvame ukukhula kusukela emandleni kuze kube namandla.
Muva nje, emuva kwesobunxele babonakale benza ubusuku obuthile Christmas bethenga nomlingani wakhe. Shaw, ugqoke konke omnyama ngesigqoko se-woolly ukuze uzivikele esihlalweni sezulu sasebusika. Bobabili banesifiso sokubheka isitolo sokuhlobisa izipho ngaphambi kosuku olukhulu.
ULuka Shaw uhamba ngokuthenga ubucwebe nentombi yakhe, u-Anouska Santos.
Kodwa ukwahlulela ngenkathi bachitha ukushaya isigaba sokuzibandakanya kwamasongo ezitolo zezimhlobiso, bangase bahlele usuku lwabo olukhethekile esikhathini esizayo esikude kakhulu. Ngezansi uLuka Shaw nentombi yakhe u-Anouska Santos emcimbini we-UnitedXUUMXUnicef ​​wesidlo sakusihlwa.
ULuka Shaw nomthandi wakhe, u-Anouska Santos
ULuka Shaw Ubuntwana Indaba I-Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
ULuka wazalelwa futhi wakhulela emkhayeni owodwa owaziwa ngesikhathi esisodwa phakathi kweNkosiston Upon Thames United Kingdom. Lokhu kwakungaphambi kokutshalwa kwebhola lebhola elikhokhelwa indodana yabo yokuqala.
Uyingane ethandekayo yabazali bakhe ngakho-ke wathola uthando oluhle nomndeni wakhe othandekayo. Ngaphezu kwalokho, uhlonipha umndeni wakhe ngokuphumelela kwakhe. Ngezansi uMnu. Paul Shaw, umkakhe othandekayo uJoanna Shaw (ukubuka emuva) kanye nezingane zabo ezibandakanya uLuka Shaw.
ULuka Shaw Umndeni
Unina nomama kaLuka bangabazali abahle kakhulu abahlala naye njalo kuzo zonke izimo.
ULuka Shaw Ubuntwana Indaba I-Untold Biography Facts -ULuka Shaw uVs Vs Mourinho
ULuka umfowabo kaShaw uphinde wenqaba ukuya enkundleni enkulu ye-Twitter lapho ebonakala ehlukumezekile Jose Mourinho.
UBen Shaw ubonakala ehlukumezekile ngemuva kokuthi i-Special One ilahle umfowabo ngaphandle kweqembu lakhe elilahlekelwe yi-4 - 0 eya e-Chelsea.
Ngaphambi kokuba aqale ukuhlukunyezwa Jose Mourinho, UBen waqala ukufisa iqembu lakhe, ethi: "Inhlanhla namuhla u-Utd."
Kodwa-ke, izinto zaphenduka ngokushesha njengoba iqembu limenyezelwe futhi uShaw ushiywe, kanti uBen uthi ubhale lokhu okulandelayo kumithombo yezenhlalo.
Ukukhathazeka kukaBenny noJoseus Mourinho
ULuka Shaw wayelokhu ethola ekupheleni kokuthola Jose Mourinho ukuthukuthela okwenze ukuba akhishwe eqenjini lakhe. Jose Shaw ovame ukugxekwa esidlangalaleni kangangokuthi abadlali abaningi base-United baphoqeleka ukududuza lo mvikeli omncane.
Ukukhathazeka kukaJose Mourinho noLuka Shaw
ULuka Shaw Ubuntwana Indaba I-Untold Biography Facts -Ividiyo ye-Leg Break
ULuka Shaw ubeke wabhekana nobuhlungu obungenakucatshangelwa kwekhefu elidabukisayo emlenzeni we-Champions League ngokumelene nePSV.
Ngaphansi kwemizuzu engu-15 emdlalweni, ibheyili yangakwesokunxele yayikhokhela endaweni yokuphikisana lapho uHector Moreno, umvikeli we-PSV, engenelele kuye.
ULuka Shaw Ubuntwana Indaba I-Untold Biography Facts -Ubuntu
UDanny Rose unguKhansela futhi unesici esilandelayo ebuntwini bakhe.
Amandla kaLuka Shaw: Ukuziqhenya, ukucabanga okukhulu, ukwethembeka, ngokomzwelo, ukuzwelana nokukholisa.
Ubuthakathaka bukaLuka Shaw: I-Moody, ukungathembeki, okusolisayo, okukhohlisayo nokungaphephile.
Lokho uLuka Shaw akuthandayo: Ubuciko, izinto zokuzilibazisa ekhaya, ukuphumula eduze noma emanzini, ukusiza abathandekayo, isidlo esihle nabangani.
Okushiwo nguLuka Shaw: Abafokazi, noma yikuphi ukugxeka kukaMama nokuveza impilo yomuntu siqu.
ULuka Shaw Ubuntwana Indaba I-Untold Biography Facts -Isizathu ngemuva kwesidlaliso
The Sun kubike ukuthi abadlali be-United baqambe ngokuthi uLuka Shaw 'I-Dollar Six Million Dollar'. Lokhu kubangelwa ukuthi abe nokholo olufanayo no-astronaut uSteve Austin owalimala kabi lapho isikhala sakhe siphelile.
ULuka naye wabhekana nekhefu lokudabuka ngesikhathi i-Champions League inqotshwa nePVV Eindhoven.
ULuka Shaw Ubuntwana Indaba I-Untold Biography Facts -Ukuhlaselwa Eqinisweni Okungqondweni
ULuka Shaw useziqhathanise nomuntu owayekade eseManchester United, uPatrice Evra, ngokuyinhloko ngokusekelwe ekutheni ngubani oye wayithatha indlela yokuhlukumeza kakhulu emdlalweni. Yebo, u-Evra uthole idumela njenge-wingback ehlaselayo izibalo ze-BUT ziphakamisa ukuthi u-Shaw kungcono.
Amaphuzu avela ukuthi uLuka Shaw unengqondo yokuhlaselwa kuka Evra
Ngokwezibalo, lo mfana wenza izigxobo ze-141 kubadlali beqembu lakhe ekubukeni kwe-35 Premier League - ngaphezu kuka-Evra ophethwe - futhi waba nezinga lempumelelo ye-56% lapho ezama ukudubula ibhola.
ULuka Shaw Ubuntwana Indaba I-Untold Biography Facts -UPaul Scholes akajabuli
Indoda eyodwa uShaw akazange agxile kuze kube yimanje nguPaul Scholes. Umdlali omangalisayo waseManchester United uhlale njalo siphume phezu komthamo wamanani iqembu lakhe langaphambili likhokhele umvikeli futhi wathi i-Red Devils kumele isayine umdlali. U-Scholes, owenza ukubonakala kwe-718 ngokugcwele kwe-United ngeminyaka engu-20-career, usanda kucashunwa ethi i-£ 30 + million ekhishwe uShaw "Ngobuwula".
UPaul Scholes akavumelani noLuka Shaw
Ngamazwi akhe ..."Ngemuva ongakwesokunxele okufanele uzuze imali engu-£ 34 million ibonisa ukuthi indlela yokudlala idle ngayo. Ngalokho imali, Ngifuna isikhungo esizokwenza amaphuzu we-30 ngesizini "
ULuka Shaw Ubuntwana Indaba I-Untold Biography Facts -Umphikisi wakhe obi kakhulu
ULuka Shaw uye wahlasela abanye babaphikisi abesabekayo. Okuthandwa ngu I-Eden Hazard, Daniel Sturridge futhi U-Wilfried Zaha, Luis Suarez konke okuphezulu.
Kodwa ngubani ophikisana naye obesaba kakhulu? Cha, hhayi uSuarez, owaziwa ngokulimaza abaphikisi abaphikisayo. Ikona UVictor Moses. Uma kubuzwa kamuva I-Twitter Q & A ngubani owayesaba kakhulu umphikisi, le nkanyezi yaphendula, mhlawumbe isimanga:
"Lokho kuyinkimbinkimbi kodwa ngifuna UVictor Moses, nje ngezinga lakhe namandla. Ngangihlale ngithola uvivinyo olunzima kakhulu. "
ULuka Shaw Ubuntwana Indaba I-Untold Biography Facts -Ukulinda kwentsha
Naphezu kokuba ngumvikeli wesine kakhulu kunazo zonke emhlabeni, ukudonsa inholo ye-£ 100,000-a-week nxazonke, abadlali kanye nabalandeli akufanele balindele ukubona uLuka Shaw ehamba ngemoto emothekayo.
Lokhu akusho ukuthi akakwazi ukukhokhela eyodwa - amaholo akhe e-United amenze abe omunye wezingane ezinomona kakhulu emhlabeni.
Emuva ngaleso sikhathi, Kungenxa yokuthi wayengakadluli ukuhlolwa kwakhe kokushayela. Izikhathi ezinjengalezi ukhumbule ukuthi uShaw osemusha wayekade ekhona ngaleso sikhathi.
Wayengu-18 kuphela lapho ejoyina u-United. Ngaphambi kokuba ajoyine, wayesaphila nabazali bakhe. Abazali bakhe bavame ukumshayela ukuba aqeqeshe futhi adlale imidlalo. Lokhu kwakungakafiki nangaphambi kokuya kweNdebe Yomhlaba ye-2014. UShaw wathatha inkambo yokushayela eviki elide, ngemuva kokuzibophezela kwakhe kweNdebe yoMhlaba ye-2014. Lokhu kwakumzamo wokuthola ilayisense ekugcineni. Ukuguquka kwakhe kusuka enkundleni encane ecebile kuze kube umuntu omdala kwakungenye into.
Siyabonga ngokufunda i-Story of Childhood Story kaDanny Rose kanye namaqiniso angama-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!.
I-Southampton Football Diary
I-Ferran Torres Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Ama-Lorenzo Sanz Childhoood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Mashi 29, 2020
I-Jamaal Lascelles Ingane Yendaba I-Untold Biography Facts
John Stones Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
U-Wilfried Zaha Ingane Yendaba Yabantwana Plus Untold Biography Facts